FPS ဂိမ်းကိုရှာဖွေဘယ်လိုနေသလဲ? အဘယ်အရာကို FPS တစ်ဦးအဆင်ပြေဂိမ်းဖြစ်သင့် - ဂိမ်းပြဿနာများ - 2019
FPS ဂိမ်းကိုရှာဖွေဘယ်လိုနေသလဲ? အဘယ်အရာကို FPS တစ်ဦးအဆင်ပြေဂိမ်းဖြစ်သင့်
ငါတိုင်းဂိမ်း (အနည်းဆုံးတောင်မှနည်းနည်းအတွေ့အကြုံနှင့်အတူ) ဘာ FPS (တစ်စက္ကန့်ဘောင်) ကိုသိကြောင်းဆိုပါစို့။ အဆိုပါဂိမ်းထဲမှာဘရိတ်နှငျ့ရငျဆိုငျကြသူအနည်းဆုံးအဲဒီ - သူတို့သေချာဘို့အသိရကြ!
ဤဆောင်းပါး၌, ငါသည်ဤညွှန်းကိန်းအပေါ်လူကြိုက်အများဆုံးမေးခွန်းများကိုမြင်ချင် (သူယေဘုယျအားဖြင့်ဖြစ်သည့် FPS, ပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ဘယ်လိုသင်မည်သို့သူ့ကိုသိလား, အဘယ်ကြောင့်စသည်တို့ကို, မှီခိုဖြစ်ပါတယ်) ။ ဒါကြောင့် ...
သင်ဘယ်လိုဂိမ်းထဲမှာသင့်ရဲ့ FPS သိလား
program ကို FRAPS install လုပ် - သင့် FPS အဘယ်အရာကိုထွက်ရှာရန်အလွယ်ကူဆုံးနှင့်အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သင်မကြာခဏကွန်ပျူတာဂိမ်းကစားလျှင် - ကမကြာခဏသင်ထွက်ကိုကူညီဖို့လုံလောက်ပါတယ်။
အနည်းဆုံးပြော - က (သင့် screen ပေါ်မှာဖြစ်ပျက်သမျှမှတ်တမ်းတင်) ဂိမ်းမှဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်များ၏တဦးတည်းဖြစ်၏။ ကွန်ပျူတာနှေးကွေးပါဘူး - ထို့ပြင် developer များဂိမ်းဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်အခါ, ဒါမှနီးပါး, သင့် CPU ကိုဗွီဒီယိုချုံ့ load မအထူး codec, created ပွီ! အပါအဝင် FRAPS ဂိမ်းထဲမှာ FPS ၏နံပါတ်ပြသထားတယ်။
တဦးတည်းအားနည်းချက်က၎င်း၏ codec သောရှိပါသည် - ဗွီဒီယိုအလုံအလောက်နှင့်မည်သည့်အယ်ဒီတာအတွက်တည်းဖြတ်ပြောင်း၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်ကို၏အကျိုးဆက်အတွက်ကြီးမားသောကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကို Windows ရဲ့နာမည်ကျော်ဗားရှင်းအတွက်အလုပ်လုပ်တယ်: XP, Vista, 7, 8, 10 ဒါဟာစစ်ဆေးခြင်းများအတွက်အကြံပြုသည်။
သငျသညျတပ်ဆင်ရန်နှင့်ဖြန့်ချိ FRAPS, ပရိုဂရမ်တွင် "FPS" အပိုင်းကိုဖွင့ပူသော့ချက် (set ပြီးနောက်ငါအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံရှိသည် - ဒီခလုတ်ကို F11 ဖြစ်ပါသည်).
ဂိမ်းထဲမှာ FPS ဖော်ပြရန်ခလုတ်။
ယင်း utility ကိုအပြေးနှင့်ကြိုတင်ခလုတ်ကိုသောအခါ - သင်ကစားပွဲကို run နိုင်ပါတယ်။ (အဆက်တင်ပေါ်တွင်မူတည်ပြီးတခါတရံ left တစ်ခါတစ်ရံလက်ျာဘက်,) ထိပ်ညာဘက်ထောင့်တွင်ဂိမ်းထဲမှာသင်ကအဝါရောင်နံပါတ်များကိုမြင်ရပါလိမ့်မည် - ဒီ FPS များ၏အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ် (သင်တို့ကိုတွေ့မြင်ကြဘူးလျှင် - ကျွန်တော်အရင်ခြေလှမ်းအတွက်ခန့်ထားပြီဖြစ်သော hotkey, နှိပ်).
လက်ျာဘက်၌ (လက်ဝဲ) ဂိမ်းထဲမှာထိပ်ဆုံးထောင့်အဝါရောင်နံပါတ်များ FPS ။ ဒီဂိမ်းမှာတော့ - FPS 41 ဖြစ်ပါတယ်။
အဘယျသို့ဖြစ်သင့် FPS(နှေးနှင့်ဘရိတ်မပါဘဲ) အငြိမ့်ကစားရန်
ပိုကောင်း - FPS ၏နံပါတ်ယေဘုယျအားဖြင့်ပိုမိုကြီးမား။ သို့သော် 10 FPS နဲ့ 60 FPS အကြားခြားနားချက်လျှင် - တောင်ဝေးကွန်ပျူတာဂိမ်းလူတစ်ဦးကနေ 60 FPS အကြားနှင့် FPS 120 အကြားခြားနားချက်ကိုသတိပြုမိ - မရတိုင်းအတွေ့အကြုံရှိဂိမ်းကစား disassemble မည်! ငါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မြင်သည်အတိုင်း, ထိုကဲ့သို့သောအငြင်းပွားဖွယ်ပြဿနာဖြေဆိုဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ် ...
ဂိမ်း 1. အရောင်းသွက်
လိုအပ်သောငွေပမာဏကို FPS အတွက်တစ်ဦးကအလွန်ကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ဂိမ်းသူ့ဟာသူစေသည်။ ဥပမာဒီရှုခင်းအဘယ်သူမျှမမြန်ဆန်ချွန်ထက်သောအပြောင်းအလဲ (ဥပမာ, turn-based မဟာဗျူဟာ) ရှိပါတယ်ဘယ်မှာနည်းဗျူဟာအချို့ကြင်နာပါလျှင် - ကအတော်လေးအဆင်ပြေသည်, သငျသညျ 30 FPS ကစား (နှင့်ပင်နည်း) နိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်အရာသည်သင်၏တုံ့ပြန်မှုကိုတိုက်ရိုက်သင့်ရဲ့ရလဒ်ပေါ်မှာမူတည်ရှိရာအမြန်ပစ်ခတ်မှုဂိမ်းအချို့မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဂိမ်းမှာတော့ - frames များကိုအရေအတွက် (သင်ရုံနဲ့အခြားကစားသမားများ၏လှုပ်ရှားမှုများကိုတုံ့ပြန်ရန်အချိန်ရှိမည်မဟုတ်ပါ) သင့်ရှုံးနိမ့်ဆိုလိုခြင်းငှါထက်နည်း 60 ဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျကွန်ယက်ပေါ်မှာကစားမယ်ဆိုရင်ရုံဂိမ်းတစ်ခုသတ်သတ်မှတ်မှတ်အမျိုးအစားတစ်ခုမှတ်ချက်အောင် - FPS (များသောအားဖြင့်) ၏အရေအတွက်ကို PC ပေါ်မှာတစ်ခုတည်းဂိမ်းထက်ပိုမိုမြင့်မားဖြစ်သင့်သည်။
60 နှင့် 100 Hz အကြားခြားနားချက် - - သင်ကသမားရိုးကျ LCD ကိုမော်နီတာ (သူတို့ 60 Hz အများစု၌ရှိကြ၏ကဲ့သို့) ရှိပါကသင်သည်သတိထားမိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ထပ်အရာ, သင်အွန်လိုင်းဂိမ်းအချို့မျိုးများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်လျှင်, သင် 120 Hz တစ်ကြိမ်နှုန်းနှင့်အတူတစ်ဦးမော်နီတာရှိသည် - ထို့နောက်ကအနည်းဆုံး 120 (သို့မဟုတ်အနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မား) မှတက်, အ FPS တိုးမြှင့်ဖို့သဘာဝကျပါတယ်။ မှန်ပါသည်, သူဂိမ်းထဲမှာပညာရှင်ပီသစွာကစားထားပြီး - သူ :) လိုအပ်သောမော်နီတာငါ့ကိုထက်ပိုကောင်းသိတယ်။
ယေဘုယျအားဖြင့်အများဆုံးဂိမ်းနိူးသည်, ခရီးသွားများအတွက် 60 FPS ဖြစ်လိမ့်မည် - နှင့်သင့် PC ကိုပိုပြီးပြီးတော့, ဒီပမာဏကိုခေါ်ဆောင်သွားသည်ဆိုပါစို့ကြောင့်သူ့ကိုထဲကညှစ်ရန်မသဘာဝကျပါတယ်လျှင် ...
ဂိမ်းထဲမှာ FPS ၏နံပါတ်တိုးမြှင့်ဖို့ဘယ်လို
အဲဒီအစားရှုပ်ထွေးဆိုတဲ့မေးခွန်းကို။ နီးပါး Unreal - ကြောင်းများသောအားဖြင့်အားနည်းသံနှင့်အတူကြီးမားတဲ့ margin ကတိုးမြှင့်ဖို့အနိမ့်သံနှင့် FPS နဲ့ဆက်စပ် FPS တစ်ဦးအနိမ့်နံပါတ်, အမှန်မှာ။ သို့သော်အောက်တွင်တစ်စာရွက်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုအားလုံးအတူတူပင်, တစ်ခုခု ...
"အမှိုက်သရိုက်" ၏ 1. Windows ကိုရှင်းလင်းရေး
ငါလုပ်အကြံပြုပထမဦးဆုံးအရာ - ။ (အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်တစ်လစနစ်သန့်ရှင်းရေးမပါဘူးဆိုရင်အလုံအလောက်စုဆောင်းထားတဲ့၏) ကို Windows ကနေစသည်တို့ကိုအပေါငျးတို့သ Junk ဖိုင်များကို, မမှန်ကန်တဲ့ Registry ကို entries တွေကို, ဖယ်ရှားပစ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အောက်ကဆောင်းပါး Link ကို။
acceleration နဲ့ Windows (အကောင်းဆုံး tools တွေ) သန့်ရှင်းရေး:
ဗီဒီယို 2. Acceleration
ဒါကမျှမျှတတထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဗီဒီယိုကဒ်ကားမောင်းသူများသောအားဖြင့်မြင့်မားတဲ့ရုပ်ပုံအရည်အသွေးကိုသေချာစေရန်အကောင်းဆုံး setting များကိုသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို။ သငျသညျအတန်ငယ်လျော့နည်းသွားရညျအသှေးကို (မျက်စိမှမကြာခဏမြင်နိုင်မဟုတ်) ဖြစ်ကြောင်းအထူးအပြင်အဆင်များရှိပါကသို့သော် - FPS ၏နံပါတ် (မြန်နှုန်းမြင့်အောင်လုပ်ခြင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး) ကြီးထွားလာ!
ငါ (အောက်တွင်လင့်များ) ဖတ်ရှုဖို့အကြံပြု, ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာဤအကြောင်းအရာအပေါ်ဆောင်းပါးများကို၏စုံတွဲတစ်တွဲရှိခဲ့ပါတယ်။
AMD ၏ (ATI Radeon) ၏ acceleration -
Nvidia ကဂရပ်ဖစ်ကဒ်များ acceleration -
အဆိုပါ FPS အနည်းငယ်တိုးမြှင့်ခြင်း, ဂိမ်းအရှိန်မြှင့်ပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးတော့ ... - ဆန္ဒဆုံးရှုံးခဲ့ရခံရဖို့ (ထိုပစ္စည်းကိရိယာများဖျက်ဆီးရမှာများ၏အန္တရာယ်လည်းမရှိအရည်အချင်းမရှိတဲ့လုပ်ရပ်တွေပါလျှင်!), သငျသညျဗီဒီယိုကဒ်နှုန်းမြင့်အောင်လုပ်ခြင်းဖို့ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်။ ယင်းအရှိန်အကြောင်းအသေးစိတ်ကိုအောက်တွင်ငါ၏အဆောင်းပါးထဲမှာကရှင်းပြသည်။
မြန်နှုန်းမြင့်အောင်လုပ်ခြင်းကဗီဒီယို (ခြေလှမ်းတို့ကခြေလှမ်း) -
ဒီတွင်ရှိသမျှတို့ကိုငါအဆင်ပြေဂိမ်းန်းကျင်ရှိသည်။ အကြံပေးချက်များ FPS တိုးမြှင့်ဖို့အဘို့ - ငါအလွန်အမင်းတန်ဖိုးထားပါလိမ့်မည်။